हातखु’ट्टा घिसार्दै जी’न्दगी ल’तार्ने शा’रदाको संघर्ष…. – कस्ले सुनिदेला, कस्ले बुझिदेला….. ? – Gorkhali Dainik
October 6, 2020 546
त्यसैमा सहभागी हुन अशक्त शरिर घिसार्दै अत्यन्तै कष्टका साथ निकै टाढा रहेको पश्चिम खोलागाउँवाट मुसिकोट खंलगा पुगेकि रहेछिन शारदा ।
बेला बेला उनलाई पढाई खर्च समेत सहयोग गर्दै आउनु भएका थापाको समन्वयमा शारदा सग मैले भेट गरे । म त्यति बेला अन्नपूर्ण राष्ट्रिय दैनिक र दि हिमालयन टाइम्समा संवाददाता थिए ।
मैले उनको संघर्षबारे स्टोरि तयार गरेर प्रकाशनका लागि पठाए । स्टोरी छापिए पछि विभिन्न ठाउँवाट आएको रकमले उनलाई केही सहयोग पनि भयो ।
उनि जन्मजात अपांग हुन । तर पनि अदम्य शाहसका साथ उनले गरेका संर्घषहरु कयौँ युवाहरुका लागि प्रेरणादायी थिए ।जन्मजात दुवै खुट्टा नचलेपछि शारदालाई हिडन नमिल्दो रहेछ ।
दुई हातमा चप्पल लगाएर हात खुट्टा टेक्दै दुई दिन लगाएर भविस्यको खोजी गदै कहिले सदरमुकाम र कहिले घर, कहिले गाविस कार्यालय ! लोकसेवाको परीक्षाका लागि कहिले दाङ कहिले काठमाडौ ।
Prev१९ करोड ५५ लाख बिगो बराबरको…‘गुण्डानाइके’‘बले’विरुद्ध….मुद्दा दायर…!
Nextकुण्डली मिलाएर विवाह गर्नुको कारण यस्तो…… ?